Golaha Guurtidi Somaliland Oo Muddo Kordhin u Sameeyay Xukuumadda Siilaanyo – Goobjoog News
Golaha Guurtidi Somaliland Oo Muddo Kordhin u Sameeyay Xukuumadda Siilaanyo
Kulan ay isugu yimaadeen golaha guurtida ee maamulka Somaliland ayaa muddo kordhin waxaa loogu sameeyay xukuumadda uu hogaamiyo Axmed Maxamed Siilaanyo.
Golahan ayaa isku raacay in markii ay arkeen arimo badan ay go’aan sadeen lagu daro waqti ah Sanad iyo 10 Bilood.
Halkaan Hoose ka akhri qoraalka ay soo saareen Golaha Guurtida:-
Golaha Guurtidda SL , ayaa isagoo tixraacayay warqada Madaxwaynaha SL ee LrSL/M/GG/81/2-3218/04/2015 ee25/04/2015, kuna saabsanayd nuxur ahaan ka waajibaad qaadashada dibu- dhaca ku yimid doorashadii Madaxtooyada iyo Golaha Wakiiladda, kuna lifaaqnayd warqaddii koomishanka doorashooyinka qaranka, ayaa gudo galay muddo korodhsiimada .
Haddaba Golaha Guurtidu ,Markii uu dhagaystay warbixintii Guddigga oo ay ku ladhnaayeen fikradihii,aaraadii , iyo tallooyinkii
Markii uu qiimeeyey xaaladka , iyo duruufaha ka jira Gobolladda iyo Degmooyinka Bariga iyo guud ahaan ba SL ;
Markii uu lagama-maarmaan u arkay in ay ka suurto –galaan Diwaan-gelinta muwaadinka iyo cod-bixiyeyaashu dhammaanba SL , si ay u suganto is- raacsananta dhul ahaaneed iyo dad ahaaneedba ee Dastuurku waajibiyay ;
Markii uu yaqiinsaday in go’aankii ay ku cayimeen Koomishanku wakhtiga doorashadu u ahaa mid baalmarsan,waa
faqsanayna Dastuurka iyo shuruucda dalka, iyago sammeeyay muddo korodhsiimo anay awood sharciyeed u lahayn ;
Markii uu si mugleh u qiimeeyay xaalaadka dhaqan/dhaqaale bulsho, iyo nabadgalyaba, guud ahaanba , gaar ahaana saamaynta dhaqaale ee colaadda ka oogan gacanka cadmeed ay ku yeellatay ganacsigii Somaliland ;
Iyadoo laga taxadirayo , dib- u dhac dambe oo ku yimaada Doorashooyinkan iyo mudo kordhin soo noq-noqota Iyo dhammaystir la’aan qabyooyinka taagan ;
Marku arkay Qoddobka 42aad faqradiisa seddexaad ee Dastuurka somaliland ;
Marku arkay Qodobka 83aad faqradiisa 3aad iyo 5aad ee Dastuurka dalka Somaliland;
warqadda lambar KDQ/XK/406/2015 ee 20/04/2015, kana soo baxday xafiiska koomishanka Doorashooyinka Qaranka , madama anay
waafaqsanayn xeerka doorashada lambar 20/2001,qoddobkiisa 8aad oo u dhigan nuxur ahaan “in anay koomishanku cayimi Karin muddo/maalin doorasho oo ka baxsan dhammaadka muddo xileedka Madaxwaynaha, ku xigeenka iyo Golaha wakiiladdaba, ‘’sido kalana anay waafaqsanayn qoddobada 42aad iyo 83aad ee Dastuurka JSL .
2- Waxa muddo xileedkii Madaxwaynaha iyo ku xigeenka madaxwaynaha oo ku eg 27/7/2015, lagu sammeeyay korodhsiimo
5- Doorashada Maddaxtooyada iyo Golaha Wakiiladdu waxay qabsoomayaan isla hal wakhti, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyay , oo waafaqsan qoddobadda 42aad iyo 83aad ee Dastuurka Somaliland .
Dhinaca kalana beesha caalamka waxaan u shegaynaa in qarankani iyo ummaddiisuba u baahan tahay tageeradooda ,balse teegaradoodu anay noqon mid ka soo horjeeda maslaxada, danta, rabintaanka, doonista shacbiga iyo jiritaanka madax-bananidda JSL.